ဖြောင့်မတ်သော မီဒီယာ ဆိုရာဝယ်… | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Love and works inaFamily
“ဖွတ်မရ ( ကြံ့ ဖွတ် ) ၊ ဒါးမဆုံး ( တရား ဓမ္မ )” »
ဖြောင့်မတ်သော မီဒီယာ ဆိုရာဝယ်…
အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၄ စိန်ရတုခန်းမ မိန့်ခွန်းနဲ့ အမေးအဖြေတွေကို တိုက်ရိုက်နားထောင်ခဲ့ရသူတွေဟာ ဘာတွေ မေးကြ ပြောကြတယ်ဆိုတာကို သိခွင့် ရကြပေမယ့် တစ်ချို့လူတွေအတွက်ကတော့ နောက်နေ့ထုတ် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်တွေရဲ့ ဖြတ်ကတ်ညှပ် သတင်းတွေကိုပဲ ဖတ်ခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၄ စိန်ရတုခန်းမ မိန့်ခွန်းနဲ့ အမေးအဖြေတွေကို တ၀က်တပျက်ဖော်ပြတဲ့7Days Daily သတင်းစာ၊ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားရဲ့မိန့်ခွန်းလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး အပြည့်အစုံ မဖော်ပြခဲ့တဲ့ Democracy Today သတင်းစာတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အံ့သြစရာ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီလောက်တစ်ကမ္ဘာလုံး သိနေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို နည်းနည်းလေးဖြစ်စေ ဖုံးကွယ်ဖော်ပြလိုစိတ်ဟာ မြန်မာမီဒီယာတွေမှာ ခုချိန်ထိ ဘာကြောင့်များ ရှိနေရသေး သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟာ စိတ်ထဲမှာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ သတင်းစာတွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ နား မျက်စိ ဖွင့်ပေးတဲ့ အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ မျက်စိ နား ဖွင့်ပေးရမယ့်နေရာမှာ မျက်စိနား ကြီးအောင် လုပ်ပေးရမယ့် လူတွေကိုယ်တိုင်က သတင်းအပြည့်ပေးနိုင်ပါလျှက် ပေးခွင့်ရှိပါလျှက် သိစေချင်တာလောက်ကိုပဲ တ၀က်တပျက်ဖော်ပြ၊ မသိစေချင်တာကို အတင်းလိုက်ဖုံး သတင်းဆိုလိုရင်းကို မှေးမှိန်ဝါးချ လုပ်နေတာဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သွားနေပါပြီလို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုက မီဒီယာတွေရဲ့ ကျင့်ဝတ် မဖြစ်သင့်တော့ပါဘူး။
အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၄ စိန်ရတုခန်းမ မိန့်ခွန်းနဲ့ အမေးအဖြေတွေအပြည့်အစုံဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်အစိုးရက တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားတာကို ဒီနေရာ ( http://whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/14/remarks-president-obama-young-southeast-asian-leaders-initiative-town-ha ) မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Democracy Today သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတအိုဘားမားရဲ့မိန့်ခွန်းဖြတ်ကပ်ညှပ်သတင်းကို နိုဝင်ဘာ ၁၅ နေ့ထုတ် သတင်းစာ စာမျက်နှာ ၁၆ နဲ့ ၁၇ မှာ SPECIAL REPORT ခေါင်းစဉ်နဲ့ တွေ့နိုင်သလို Yangon Media Group Facebook စာမျက်နှာမှာ Online သတင်းအဖြစ်လည်းတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။
မီဒီယာလောကမှာ စာနယ်ဇင်းသမား ဖြစ်ဖို့ အနည်းဆုံး စာနယ်ဇင်းသင်တန်းတွေ၊ ကျင့်ဝတ်တွေ အများကြီး သင်ရ တက်ရ လိုက်နာရပါတယ်။
စာနယ်ဇင်းသမား တစ်ယောက်က အနိမ့်ဆုံး ဘွဲ့ရ ပညာတတ် တစ်ယောက်လောက်တော့ ဖြစ်တာမို့ အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာပြန်တာ မှားစရာအကြောင်းလည်း မရှိရပါဘူး။ လိုသလို ဘာသာပြန်လို့ မရသလို ဆွဲယူ ဘာသာပြန်ခွင့်လည်း မရှိရပါဘူး။ အဓိက ထောက်ပြချင်တာက အဂတိတရား တစ်ချက်နဲ့မှ ငြိလို့ မရရပါဘူး။ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည် ဖြစ်စေ အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားပြောတာကို အတတ်နိုင်ဆုံး မြန်မာဘာသာနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်ရအောင် ဘာသာပြန်ရမှာ ဖြစ်သလို အိုဘားမား ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ ဆိုလိုရင်းကိုလည်း တမင်လမ်းလွဲအောင် လုပ်ပစ်လို့ မရပါဘူး။ ဒီအချက်တွေဟာ မီဒီယာ သမားကောင်း တစ်ဦး လိုက်နာရမယ့် အနိမ့်ဆုံး ကျင့်ဝတ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Democracy Today သတင်းစာ ရဲ့ အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားရဲ့မိန့်ခွန်းဖြတ်ကပ်ညှပ်သတင်းမှာ ဘာတွေ ဖြတ်ကပ်ညှပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို အမေရိကန်အစိုးရတရားဝင် ထုတ်ပြန်တဲ့ အိမ်ဖြူတော် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်သတင်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြချင်ပါတယ်။
(၁) ပထမ ဖြတ်ကပ်ညှပ်
မိန့်ခွန်းအစမှာပဲ သမ္မတ အိုဘားမားက ဒီလို ပြောခဲ့ပါတယ်။
PRESIDENT OBAMA: Myanmar Luu Ngae Myar Min Galarbar! (Applause.) It’s wonderful to be back in Myanmar. Everybody, please haveaseat. Haveaseat. Oh, we got some signs — “Reform is fake.” “Change…” — okay, well, you guys will haveachance to ask questions later. Yeah, you can put them away. That’s why we’re here — foratown hall. See, that’s the thing, when you haveatown hall, you don’t haveaprotest because you can just ask the questions directly.
မြန်မာလူငယ်များ မင်္ဂလာပါ။ (လက်ခုပ်သံများ) မြန်မာနိုင်ငံကို တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတာ ၀မ်းမြောက်စရာပါပဲ။ အားလုံးပဲ ထိုင်ကြပါ။ အို- ကျွန်တော် ဆိုင်းဘုတ်တွေ တွေ့တယ်- “ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာ အတုအယောင်” ဟိုတစ်ခု “အပြောင်းအလဲ” အိုကေ၊ ကောင်းပါပြီ။ ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ မေးခွန်းမေးခွင့်ရမှာပါ။ အဲဒီ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ချထားပါဦး။ အမေးအဖြေတွေလုပ်ဖို့ ဒီကိုရောက်လာတာပါ။ ကြည့်စမ်းပါဦး။ အမေးအဖြေ လုပ်ပြီဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ဆန္ဒပြကြမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ မေးခွန်းတွေ တိုက်ရိုက် မေးနိုင်တာကိုး။”
ဆိုတဲ့ တစ်ပိုဒ်လုံးကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ Democracy Today သတင်းစာက ဖြုတ်ချပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ “ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာ အတုအယောင်” ဆိုတဲ့ စာသားကို သတင်းစာမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြရမှာကို “ကြောက်နေခဲ့တာလား” ဒါမှမဟုတ် “မီဒီယာအလုပ်ကို မီဒီယာလုပ်ဖို့ ၀န်လေးတွန့်ဆုတ်နေသလား” လို့ပဲ မေးချင် ပြောချင်ပါတယ်။ မိန့်ခွန်းမစခင် ခန်းမစင်မြင့်ရှေ့မှာပဲ သမ္မတအိုဘားမားကို မြန်မာလူငယ်အချို့က စာရွက်ကလေးတွေ ထောင်ပြခွင့် ရခဲ့ကြပါတယ်။ မိန့်ခွန်းအစမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင် အိမ်ဖြူတော်က ထုတ်ပြန်ပေမယ့် မြန်မာသတင်းစာတစ်စောင်က မရ ရအောင် ဖုံးအုပ်ကာ ဖြတ်ကပ်ညှပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အံ့သြစရာပါ။
(၂) ဒုတိယ ဖြတ်ကပ်ညှပ်
သမ္မတ အိုဘားမားက ဒီလို ပြောခဲ့ပါတယ်။
As President of the United States, I’ve made itapriority to deepen America’s ties with Southeast Asia — in particular, with the young people of Southeast Asia. And I do this for reasons that go beyond the fact that I spent some of my childhood in Southeast Asia, in Indonesia.”
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သမ္မတ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အမေရိကန်နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ဆက်ဆံရေးကို နက်ရှိုင်းအောင် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အရှေ့တောင်အာရှက လူငယ်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးပေါ့ဗျာ- အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကလေးဘ၀ကို ကုန်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေထက် ကျော်လွန်ပြီး ဒါကို လုပ်တာပါ။”
Democracy Today သတင်းစာက ဒီလို ဘာသာပြန်ပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဒီအရှေ့တောင်အာရှမှာရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တွေက လူငယ်တွေအများကြီးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ချင်ပါတယ်။ အများကြီးအဆက် အသွယ်လုပ်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ် ဘဝ ကလေးဘဝတွေကို အရှေ့တောင်အာရှ တိုင်းပြည်တွေမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ “အင်ဒိုနီးရှား” ဖြုတ်ညှပ်ခံရပြန်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ဘာသာပြန်တာလည်း လွဲနေပါတယ်။ အမှန်က အင်္ဂလိပ်စာ မတတ်တာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကို ဖြုတ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ Democracy Today သတင်းစာအယ်ဒီတာတွေပဲ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
(၃) တတိယ ဖြတ်ကပ်ညှပ်
But I do it mainly because the 10 nations of ASEAN are home to about one in ten of the world’s citizens. About two-thirds of Southeast Asia’s population is under 35 years old. So this region —aregion of growing economies and emerging democracies, andavibrant diversity that includes oceans and islands, and jungles and cities, and peoples of different races and religions and beliefs — this region will shape the 21st century.
“ဒါပေမယ့် အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ ဒီလိုဆက်ဆံရေး ထူထောင်ရခြင်းဟာ အဓိကအားဖြင့်တော့ အာဆီယံက ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့၁၀ ပုံ ၁ ပုံ ရှိတာကြောင့်ပါ။ အရှေ့တောင်အာရှလူဦးရေရဲ့ သုံးပုံ နှစ်ပုံလောက်ဟာ အသက် ၃၅ နှစ်အောက် အရွယ်တွေပါ။ ပြီးတော့ ဒီဒေသဟာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့၊ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားနေတဲ့၊ တောတောင်ရေမြေတွေ၊ ကျွန်းတွေ၊ မြို့ပြကြီးတွေ၊ မတူညီတဲ့ လူမျိုးတွေ၊ ဘာသာတရားတွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေအပါအ၀င် မတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့ အသက်ဝင်လှတဲ့ ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒေသဟာ ၂၁ ရာစုကို ပုံဖော်ပေးမှာပါ။”
Democracy Today သတင်းစာက မိန့်ခွန်းရဲ့ ဒီတစ်ပိုဒ်လုံးကို ဖြုတ်ချပစ်ပြန်ပါတယ်။ အံ့သြစရာ ဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။ မတူညီတာကိုပဲ မနှစ်သက်လေသလားလို့ အတွေးဝင်မိစရာပါ။
(၄) စတုတ္ထ ဖြတ်ကပ်ညှပ်
When I took office nearly six years ago, I said the United States would extend our hand to any nation willing to unclench its fist. And here, after decades of authoritarian rule, we’ve begun to see significant progress in justafew years.
“လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်နီးပါးက ကျွန်တော်သမ္မတ စဖြစ်တဲ့အခါ အမေရိကန်ဟာ လက်သီးဆုပ်ဖြေဖို့ ဆန္ဒရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး ချဲ့ထွင်သွားရမယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာဆိုရင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သိသာတဲ့ တိုးတက်မှုကို ကျွန်တော်တို့ စမြင်ရပါပြီ။”
Democracy Today သတင်းစာက မိန့်ခွန်းရဲ့ ဒီတစ်ပိုဒ်လုံးကို ၀ါးချ ရောချပြီး ဘာသာပြန်ပစ်ပြန်ပါတယ်။ သူ့လက်ရာက ဒီလိုပါ။
“လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်နှစ်လောက်က ကျွန် တော် သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ယူတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော် ဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတော့ ကျွန် တော်ဟာ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ တကယ့်ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှုတွေနဲ့ ဖြစ်လာရမယ်၊ နောက်တစ်ခါ မြန်မာပြည်မှာလဲ တိုးတက်မှုတွေရှိလာရမယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ ကမ္ဘာထဲမှာ အလားအလာ ကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။”
“decades of authoritarian rule ဆယ်စုနှစ်များစွာ အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး” ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို Democracy Today သတင်းစာက ဘာကြောင့် လက်ရှောင်ရပါသလဲ။ အံ့သြစရာ ဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။
(၅) ပဉ္စမ ဖြတ်ကပ်ညှပ်
On this visit, I’ve met separately with President Thein Sein and Daw Aung San Suu Kyi, as well as members of parliament, and civil society leaders. And we discussed key reforms that have to be made to ensure that human rights and freedoms are respected, and the people of this country can reach for their rightful place in the region and the world.
“ဒီတစ်ခေါက်အလည်ခရီးမှာ ကျွန်တော်ဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အဲဒီလိုပဲ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့စည်းက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ သီးခြားစီတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်မှုကို လေးစားဖို့အကြောင်းတွေ၊ ဒီနိုင်ငံ ပြည်သူတွေဟာ ဒေသတွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ နေရာမှန်ကို ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။”
Democracy Today သတင်းစာရဲ့ ဘာသာပြန်ချက်ကို သမ္မတဦးသိန်းစိန် မတွေ့သေးတာ သေချာပါတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်သာ ဒီဘာသာပြန်ချက်ကို တွေ့ရင် သူ့အမည်နဲ့ သူ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကို တမင်ဖြုတ်ချရကောင်းလား စွဲချက်ထပ်ထွက်လာစရာ ရှိနေပါပြီ။ Democracy Today သတင်းစာရဲ့ ဘာသာပြန်ချက်က ဒီလို လွဲချော်နေပြန်ပါတယ်။ ရောချရုံတင်မကဘဲ တလွဲတချော် ဘာသာပြန်တာကိုပါ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရပြန်ပါတယ်။
“ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာ ပါလီမန်မှာ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အ ရေးကိစ္စတွေ လူတိုင်းရရှိဖို့ လေးစားလိုက်နာဖို့ ဒီတိုင်းပြည်မှာ လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက် နောက်တစ်ခါ ဒီဒေသထဲမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအ တွက် ဘယ်လို ဆက်လုပ်သွားမလဲဆိုတာ ဆွေး နွေးခဲ့ပါတယ်။” လို့ သတင်းစာက ဘာသာပြန်ချခဲ့ပါတယ်။
အံ့သြစရာ မြန်မာ့သတင်းစာတစ်စောင်ရဲ့ ဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ အနည်းအကျဉ်းတတ်ရင်တောင် ဒီလို အမှားကျူးလွန်ဖို့ ခဲယဉ်းလွန်းလှပါတယ်။
(၆) ဆဌမ ဖြတ်ကပ်ညှပ်
Being able to look past the scars of violence takes courage. Securing the gains of freedom and democracy requires good faith and strength of will, and tolerance and respect for diversity, and it requires vigilance from all citizens. The American people know well that rights and freedoms are not given; they have to be won through struggle and through discipline, and persistence and faith. And it’s often young people who have led these struggles; who have compelled us to slowly but surely perfect our own union in America over time.
Now, I understand there’saBurmese saying. I’ve got to make sure that I say this right. Ngote mi thè daing — help me out. Is that right? — tet naing hpyar yauk. (Applause.)
“အတိတ်က ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကို ပြန်ကြည့်နိုင်ဖို့ သတ္တိတွေလိုပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို သေသေချာချာရဖို့အတွက်ဆိုရင် ယုံကြည်မှုကောင်းတွေ၊ ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒတွေ၊ မတူကွဲပြားမှုအပေါ်မှာ သည်းခံလေးစားတတ်တာမျိုးတွေလိုအပ်ပြီး နိုင်ငံသားအားလုံးက နိုးနိုးကြားကြားရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးတွေ၊ လွတ်လပ်မှုတွေဟာ ဒီအတိုင်းရလာတာမဟုတ်ဘဲ ရုန်းကန်ကြိုးစားမှု၊ စည်ကမ်းရှိမှု၊ မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားမှုနဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကနေတစ်ဆင့် ဒါမျိုးတွေရအောင် လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို အမေရိကန်ပြည်သူတွေကတော့ ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဒီရုန်းကန်မှုတွေကို ဦးဆောင်တဲ့ ဒီလူငယ်တွေဟာ နှေးကွေးသွားအောင် အတင်းအကျပ်လုပ်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ အမေရိက က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြည်ထောင်စုဟာ အချိန်နဲ့အမျှ ပြည့်စုံနေတာပါပဲ။
အခု ကျွန်တော် မြန်မာစကားပုံတစ်ခုရှိတာကို သိထားပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောကြည့်ပါမယ်။ “ငုပ်မိသဲတိုင်……” လုပ်ပါဦး၊ မှန်ရဲ့လား “တက်နိုင်ဖျားရောက်” (လက်ခုပ်သံများ)”
Democracy Today သတင်းစာရဲ့ ဗလုံးဗထွေး ဘာသာပြန်ချက်တွေဟာ ဘာကိုဆိုလိုမှန်း မသိရအောင် ထိမိနေပါတော့တယ်။ “တောင်းယူရပါမယ်၊ တိုက်ယူရပါမယ်၊” ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရကို ရှာမတွေ့မပါဘူး။
“အရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှု၊ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကိုမကြည့်ဘဲ ဒီမိုကရေ စီရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကို တည်ဆောက်တဲ့နေရာ မှာ အားလုံးပါပြီးတော့ အားလုံးသောပြည် သူတွေအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့ ဒီအခွင့်အရေး တွေ လွတ်လပ်မှုတွေဆိုတာက ဒီအတိုင်းမရပါ ဘူး။ တောင်းယူရပါမယ်၊ တိုက်ယူရပါမယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မြန်မာစကားပုံ တစ်ခုကို သိပါတယ်။ ငုတ်မိသဲတိုင် တက်နိုင် ဖျားရောက်ဖြစ်ပါတယ်။” လို့ လိုရင်းမရောက် ဘာသာပြန်ချက်တွေက အံ့သြစရာပါ။
(၇) သတ္တမ ဖြတ်ကပ်ညှပ်
That’s why I’ve come and visited twice in the last few years, because we seeafuture where democratic institutions can be accountable and responsive; where political activists are free; where elections are fair; where journalists can pursue the truth; where ethnic minorities can live without fear.
“ဒါ့ကြောင့်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေမှာ ၂ ကြိမ် လာရောက်ခဲ့တာပါ။ တာဝန်ခံနိုင်ပြီး အရာဝင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသင်းအဖွဲ့တွေ ရှိတဲ့နိုင်ငံမျိုး၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားခွင့်ရတဲ့ နိုင်ငံမျိုး၊ မျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံမျိုး၊ ဂျာနယ်လစ်တွေ အမှန်တရားကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့ နိုင်ငံမျိုး၊ လူနည်းစုတွေ ကြောက်ရွံ့မှုကင်းစွာ နေထိုင်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံမျိုး ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အနာဂတ်ကို တွေ့မြင်နေရတာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။”
Democracy Today သတင်းစာရဲ့ ဘာသာပြန်ချက်မှာ “သတင်းထောက်” ပြုတ်သွားပြန်တဲ့အပြင် “မဟာမိတ်ရွေးကောက်ပွဲ” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းအတွက် အင်္ဂလိပ်စာလုံး ရှာမရခဲ့ပါဘူး။ Democracy Today သတင်းစာရဲ့ တလွဲတချော် ဘာသာပြန်တဲ့အပြင် ပြီးပြီးရော လုပ်ချတဲ့ စေတနာကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရပြန်ပါတယ်။
“ဒါကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကတည်းက လာခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ အခြေခံဥပဒေဟာ တာဝန်ခံမှုရှိရမယ်။ ဒါ ကြောင့် မဟာမိတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ မျှတမှုရှိရမယ်၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေ ဟာ ဆင်းရဲကြောင့်ကြမှုမရှိဘဲ နေနိုင်ရပါမယ်။” လို့ ဘာသာပြန်ခဲ့ပါတယ်။
(၈) အဌမ ဖြတ်ကပ်ညှပ်
La Min Oo uses his power to tell the story of his fellow Burmese. He studied at Gettysburg College in the United States. The transformation that he watched unfold through Facebook inspired him to return home and make an award-winning documentary about the plight of Burmese farmers. And he says, “My country has been closed so long, there arealot of stories to be told.” So you young people have the chance to say — to tell those stories. You have the power to improve institutions that are very important for democratic governance, like civil society, and an impartial judicial, andafree press, and private enterprise. And there’s so much to build here. In countries like this, it’s critical that you get involved in that way.
“လမင်းဦးဟာ သူ့နိုင်ငံက သူ့လူတွေအကြောင်းကို ပြောပြဖို့ ဒီစွမ်းအားကို အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အမေရိကန်က Gettysburg ကောလိပ်မှာ ပညာသင်ခဲ့ပါတယ်။ Facebook ကနေ သူစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေက သူ့ကို လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကာ မြန်မာလယ်သမားတွေရဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကြောင်း မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီး ဆုရတဲ့အထိ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ သူက “ကျွန်တော့်တိုင်းပြည်ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပိတ်ခံထားရပြီး ပြောရမယ့် အကြောင်းအရာတွေလည်း အများကြီးရှိနေပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခင်ဗျားတို့လူငယ်တွေဟာ အဲဒီဇာတ်လမ်းတွေကို ပြောပြဖို့၊ ဖွင့်ချဖို့ အခွင့်အရေး ရှိနေပါတယ်။ ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရအတွက် အင်မတန်အရေးပါတဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့လည်း ခင်ဗျားတို့မှာ စွမ်းအားရှိနေပါတယ်။ အရပ်ဖက်အဖွဲ့တွေ၊ သမာသမတ်ကျတဲ့ တရားရေးအဖွဲ့တွေ၊ လွတ်လပ်တဲ့ စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေပါပဲ။ ဒါမျိုးတွေ ဒီမှာ အများကြီး ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ရဦးမှာပါ။
ဒီလိုတိုင်းပြည်မျိုးမှာ ခင်ဗျားတို့ဟာ ဒီလိုပါဝင်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။”
Democracy Today သတင်းစာရဲ့ ဘာသာပြန်ချက်မှာ “လမင်းဦး” အမည်နဲ့ “အရပ်ဖက်အဖွဲ့တွေ၊ သမာသမတ်ကျတဲ့ တရားရေးအဖွဲ့တွေ၊ လွတ်လပ်တဲ့ စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့တွေ” စတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို ရည်ွယ်ချက်ရှိရှိ်ဖြုတ်ထုတ်ပစ်တဲ့အပြင် အိုဘားမားဖြစ်စေချင်တဲ့ အချက်ကို တမင်လမ်းလွှဲ ၀ါးချပစ်ပါတယ်။
သတင်းစာ ဘာသာပြန်ချက်က …
” မြန်မာလူငယ်တစ်ယောက် ပြည်ပမှာ ပညာလေ့လာခဲ့တယ်။ သူဒီကိုပြန် လာပြီးတော့ လယ်သမားတွေရဲ့ အကြောင်းကို Documentery ထုတ်ပြီးတော့ ဆုရခဲ့ပါတယ်။
သူဘာပြောလဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်တိုင်းပြည် ဟာ ဇာတ်လမ်းပေါင်းများစွာကို ပြောပြနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဒီဇာတ်လမ်း တွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ပြောပြနိုင်မှာပါ။ ဒီလူငယ်တွေမှာ တကယ့်ကိုခွန်အားရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရ အတွက် သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ လူတန်းစား အတွက် သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့လို့ ဒီလုပ်ငန်းတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအ တွက်လဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုတိုင်းပြည် မျိုးမှာ ဒါဟာ သိပ်ပြီးကို လူငယ်တွေအနေနဲ့ ပါဝင်နိုင်ခြင်းဟာ သိပ်ပြီး အရေးကြီးပါတယ်။” လို့ ဘာသာပြန်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
(၉) န၀မ ဖြတ်ကပ်ညှပ်
သမ္မတ အိုဘားမားရဲ့ မိန့်ခွန်းအလယ်လောက်မှာ အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားက ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီး မဝေေ၀နုအမည်ကို အတိအကျဖော်ပြခဲ့ပြန်ပါတယ်။
So Wai Wai Nu spent seven years of her youth behind bars asapolitical prisoner. And she called it her “university about life.” Today she uses that hard-earned degree to advocate for tolerance and acceptance, saying, “We too sacrificed many things for the same cause, that that is democracy.”
“ဝေေ၀နုဟာ သူ့ရဲ့ လူငယ်ဘ၀ ၇ နှစ်တာကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ် သံတိုင်အနောက်မှာ ကုန်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကို သူကတော့ “ဘ၀တက္ကသိုလ်” လို့ သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ အဲဒီဘ၀တက္ကသိုလ်က ခက်ခက်ခဲခဲရခဲ့တဲ့ ဒီဘွဲ့ကိုသုံးပြီး “ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအတွက် ကျွန်မတို့ဟာလည်း အများကြီး စွန့်လွှတ်စတေးခဲ့ရပါတယ်” လို့ပြောရင်း သည်းခံမှုနဲ့ လက်သင့်ခံမှုတွေအတွက် ပညာပေးမှုတွေ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။”
Democracy Today သတင်းစာရဲ့ ဘာသာပြန်ချက်မှာ “ဝေေ၀နု” အမည်ကို တမင်ဖြုတ်ချပြန်တဲ့အပြင် လိုရာဆွဲယူဘာသာပြန် ၀ါးချတဲ့အထိ ဘာသာပြန်သူရဲ့ မီဒီယာ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာမဲ့မှုကို အဆုံးစွန်ထိ တွေ့မြင်ရပြန်ပါတယ်။ သတင်းစာ ဘာသာပြန်ချက်က …
“နောက်တစ် ယောက်ဆိုရင် ခုနစ်နှစ်ကြာကြာ ထောင်ထဲမှာ အကျခံထားရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူဟာ ဘွဲ့လဲ ရခဲ့ပြီးတော့ ပေးဆပ်မှုတွေ အများကြီးလဲရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာဒီမိုကရေစီစနစ် အတွက် ပေးဆပ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။
အံ့သြစရာ မြန်မာ့သတင်းစာတစ်စောင်ရဲ့ ဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၀) ဒသမ ဖြတ်ကပ်ညှပ်
I expect many of you will take up the mantle of reform from student activists like Aung San Suu Kyi and Min Ko Naing; take your rightful place as leaders inastable and prosperous and progressive Southeast Asia. And as you do, I promise you will have no better friend and partner than the United States of America. So thank you very much. Kyeizu tin ba de.
ခင်ဗျားတို့ အများစုဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မင်းကိုနိုင် တို့လို တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကနေ တစ်ဆင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လက်လွှဲယူကြလိမ့်မယ်၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး ကြွယ်ဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ အရှေ့တောင်အာရှမှာ ခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ် ထိုက်တန်တဲ့နေရာကို ရယူကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ အမေရိကန်ထက် ပိုကောင်းတဲ့ မိတ်ဆွေမျိုးကို ခင်ဗျားတို့မှာ မရှိတော့ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် ကတိပေးပါတယ်။ Thank you very much. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (လက်ခုပ်သံများ)
Democracy Today သတင်းစာရဲ့ ဘာသာပြန်ချက်မှာ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ မင်းကိုနိုင်” တို့ ဘာလဲ၊ ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို မှေးမှိန်ပစ်တဲ့အပြင် အမေရိကန်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို တမင်ဖြုတ်ပစ်ပြန်ပါတယ်။
“ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ယူကြရမယ့်အခွင့်အရေး၊ အခွင့်အလမ်းတွေကို ယူပြီးတော့၊ အခွင့်ကောင်း ယူမယ့် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့အတူ လက် တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ မင်းကိုနိုင် ဒီမှာ တည်ငြိမ်ပြီးတော့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ တိုင်း ပြည်တစ်ခုဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကလဲ ဒါကိုကူညီဖို့ အမြဲတမ်းရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။” လို့ ရေးသားဘာသာပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကမ္ဘာသိအကြောင်းအရာတစ်ခုကို အများသူငါ တိတိကျကျသိခွင့်ပေးကာ နားမျက်စိဖွင့်ပေးရမယ့် တာဝန်ဟာ မီဒီယာတွေရဲ့ ပင်ကိုယ်မူလတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပင်ကိုယ်တာဝန်ကို မထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေဟာ ပြည်သူရဲ့ ဒဏ်ခတ်ဆုံးမမှုကို တစ်ရက်မှာ နာခံရစမြဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေ ထုတ်ဝေခွင့်ပြုပြီး ဘယ်လောက်မှ မကြာသေးတဲ့ကာလမှာပဲ ပြည်သူတွေရဲ့ သတင်းဗဟုသုတ လိုအပ်ချက်ကို မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အတွက် အရှုံးပေါ်ကာ ဆက်လက်မထုတ်ဝေနိုင်တော့တဲ့ သတင်းစာဂျာနယ်တွေဟာလည်း မနည်းတော့ပါဘူး။ မှန်ကန်တဲ့ သတင်းဗဟုသုတပေးရမယ့် တာဝန်ကို ဖြောင့်မတ်တဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေက တည့်တည့်မတ်မတ် ပီပီသသထမ်းဆောင်မှသာ အမုန်းတရားကင်းတဲ့၊ ဘက်လိုက်မှုကင်းတဲ့၊ ပြည်သူပြည်သားတွေကို အသိပညာ နားမျက်စိကျယ်လာစေတဲ့၊ ပြည်သူပြည်သားတွေ ချစ်မြတ်နိုးလေးစားတဲ့ မီဒီယာတွေ ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့သာ ထောက်ပြလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းဗဟုသုတ အမှန်ကိုသာ ရောင်းချပေးနိုင်မယ့် ပြည်သူအကျိုး အမှန်သယ်ပိုးနိုင်တဲ့ မီဒီယာလောက ထွန်းကားလာနိုင်ပါစေ။
၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၁၀၄
This entry was posted on November 17, 2014 at 6:48 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.